Black ကစမတ်လက်ကောက် PJS-V66S-Black က - တရုတ် Xiamen PJS နည်းပညာ
Black ကစမတ်လက်ကောက် PJS-V66S-Black က
√.Thereအားကစား mode ကို built-in ရွေ့လျားမှု Modes သာသုံးရှိပါတယ်, သင်ကလေ့ကျင့်ခန်းမှတိုက်ရိုက်လက်ပတ်ကိုဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်, အဆိုပါလက်ပတ်အားလုံးသင့်ရဲ့အားကစားဒေတာတစ်ဦးကမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်မြင်းစီး: အချိန်; ကယ်လိုရီ; နှလုံးခုန်နှုန်း B ကို: Run ကို: အဝေးသင်; ကယ်လိုရီ; နှလုံးခုန်နှုန်းကို C: ကြိုးရေပေါ်ရှပ်ပစ်ခြင်း: ကြိမ်နှုန်း; ကယ်လိုရီ; နှလုံးခုန်နှုန်း
√.Heartခပ်သိမ်းသောကာလအမျိုးမျိုးသောနှလုံးခုန်နှုန်းညွှန်းကိန်းများနှင့်သွေးဖိအားအခြေအနေများစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှုန်း Built-in High- ထိခိုက်လွယ်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းသွေးဖိအားအာရုံခံကိရိယာများ / သွေးဖိအား / သွေးအောက်ဆီဂျင်စောင့်ကြည့်, အဆင်ခြင်လေ့ကျင့်ခန်းအသံအတိုးအကျယ်စီစဉ်
√.IP67ရေစိုခံရေစိုခံ; ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံ; anti-ချေး။ ကြောက်လန့်နေကြသည်မဟုတ် IP67 ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်, ရေကူး, မိုး, ရေပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ, သငျသညျငွိမျဝနှင့်အတူကယူနှင့်ကျွန်ခံကိုချိုးဖျက်ဖို့ဘာမှလုပျနိုငျ
ထောက်ခံမှု၏ခွန်အားနှင့်တကွသင်နောက်ထပ်သွားရနိုင်သည်, √.Wechatအားကစားအားကစားမျက်နှာဖုံးသိမ်းပိုက်နိုင်သူ PK အပြင်သူငယ်ချင်းနှင့်အတူသင်တို့သည်လည်းစောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားပေးနိုငျ
√.Messageအကြောင်းအရာတွန်းအားပေး, မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုထပ်တူကျအောင်သတင်းစကားတစ်ခုရှိပါတယ်အခါ, ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုအကြောင်းအရာအားပြသရန်သုံးစက္ကန့်မက်ဆေ့ခ်ျကို interface တစ်ခုအရေးကြီးသောခေါ်ဆိုခပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုစာနယ်ဇင်းမစိုးရိမ်, တုန်ခါရန်သင့်အားသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
EXW စျေးနှုန်း: အမေရိကန် $ 14.68-15.48 / အပိုင်းပိုင်း
item အမည် Black ကစမတ်လက်ကောက်
item အမှတ် PJS-V66S-Black က
ခန္ဓာကိုယ်အရောင် Black က
ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ရေစိုခံ IP67
Battery ကို type ကို lithium Polymer
လက်ပတ်ပစ္စည်း silica gel
ထုပ်ပိုး 1pcs / box ကို 50pcs / စက္ဏူထူ
စနစ်လိုအပ်ချက်များ 4.4 Android နဲ့စနစ်ကအထက်,
system ကိုအထက် IOS8.0, ဘလူးတုသ် 4.0 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းများကို support
ဘလူးတုသ် BLE V4.0
sensor ရောင်ပြန် photoelectric နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ
ပြသ 0,96 လက်မ OLED
standby အချိန် 20 နေ့က
အလုပ်ချိန်7နေ့က
စစ်ဆင်ရေး mode ကို capacitive touch နဲ့ခလုတ်
အချက်ပေး mode ကို အမြင့်အထိခိုက်မခံ built-in မော်တာ
အားသွင်း interface ကို နှစ်ဦးကသံလိုက်ဒေတာလိုင်း
APP / APK ကိုဒေါင်းလုပ် mode ကို အန်းဒရွိုက်: FlagFit
Apple က: FlagFit
သတိပေးချက်: (Apple ကအတွက် IOS ကိုစနစ်စတိုးဆိုင်, အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းအသုံးပွုသငျ့
360 မိုဘိုင်းလက်ထောက်အတွင်းဖုန်းများနှင့်အခြားအဓိက applications များစတိုးဆိုင်
ရှာဖွေရေး APK ကိုဒေါင်းလုပ် fitcloud နှင့် install)
လုပ်ဆောင်ချက် ထိတွေ့လက်လက်စွပ် (0.96 လက်မ OLED) နှင့် 1. ခါးပတ်မျက်နှာပြင်
2. နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးအောက်ဆီဂျင်ထောက်လှမ်း, သွေးဖိအားကိုစမ်းသပ်
4. အချိန် Display, ခြေလှမ်း, မျက်နှာပြင် Display ကိုအတူအကွာအဝေးအားဖြင့်ခြေလှမ်း
5. အဆင့်, အကွာအဝေး, ကယ်လိုရီ
6. အိပ်စက်ခြင်းမော်နီတာ (အိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်, အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေး)
7. ဝင်လာသောခေါ်ဆိုခအကြောင်းကြားစာ, မက်ဆေ့ခ်ျကိုတွန်းအားပေး
ဝေမျှဖို့ 8. WeChat, QQ, Facebook အားကစား
9. ဆန့်ကျင်တစ်စက်သတိပေးချက် (အကွာအဝေးသတိပေးချက်ထဲကမိုဘိုင်းဖုန်း)
10. ခေါ်ရန် firewall က
11 နှိုးစက် နာရီ
setting 12. ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်
မျှဝေ 13. ကြံ့ခိုင်ရေးသတင်းအချက်အလက်များ
လက်ကောက် firmware ကို upgrade APK အား / APP ကိုတဆင့်, 14 SUOTA function ကို
ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်း လူမီနီယမ်အလွိုင်း / silica gel
Imprint လုပ် (လိုအပ်လျှင်) လေဆာပုံနှိပ် (500PCS), RoHS လက်မှတ်
Net ကအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 0,24
shipping အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 0,95
အရောင် Box ကို Size ကို (စင်တီမီတာ) 11.5 * 7.5 * 3.0
စက္ဏူထူ Size ကို (စင်တီမီတာ) 39.5 * 17 * 25
ယခင်: အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာကြိုးမဲ့ PJS-TS20
နောက်တစ်ခု: LED Bluetooth Speaker- PJS-X9
OLED Bluetooth ကိုစမတ်လက်ကောက်
စမတ် Bluetooth ကိုကြံ့ခိုင်ရေးလက်ကောက်
Smart Watch က Android
Smart Watch လက်ပတ်
Tw64 ဘလူးတုသ် Smart Watch
လက်ပတ်ကို Android ဒစ်ဂျစ်တယ်တယ်လီဖုန်း Band
Black ကစမတ်လက်ကောက် PJS-V66S-အပြာရောင်